Jaahwareer Ka Taagan War Uu Ka Soo Saaray Dhakhtarka Trump Baadhitaankii Danbe – Heemaal News Network
Jaahwareer Ka Taagan War Uu Ka Soo Saaray Dhakhtarka Trump Baadhitaankii Danbe
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la shageeyaa in haatan laga bilaabo uusan fayraska corona dadka kale u gudbineyn, waa sida uu sheegay dhakhtarka gaarka ee Aqalka Cad. Warbixintan Dr Sean Colney ee ku aaddan caafimaadka Trump ayaa ah warbixintii ugu horreysay tan iyo khamiistii. Galinkii hore ee Sabtida ayuu madaxweynaha khudbad ka hor jeediyay taageeraayaalkiisa isagoo ku sugan Aqalka Cad.
Waxaa jiray walaac isa soo tarayay oo ahaa iney weli jirto khatarta ah in Trump uu fayraska corona u gudbinkaro dadka ka dib 3 maalmood uu isbitaalka ku jiray. Warbixinta dhakhtarka ayaa lagu sheegay in baaritaannadii ugu dambeeyay ee muujinayeen in madaxweynaha uu ka sii yaranaayo fayraska.
Hase yeeshee warbixinta laguma sheegeen in gabi ahaanba xanuunka Covid-19 laga waayay madaxweyne Trump. 10 maalmood ka hor ayay ahayd markii ugu horreeysay ee Trump ka soo muuqdeen calaamadaha fayraska corona, waxaana maalin ka dib oo ahayd 2-dii bishan Octoobar la geeyay isbitaalka millatariga ee Walter Reed, halkaas oo muddo 3 maalmood ah lagu dabiibayay.
Ra’iisul Wasaare Rooble Oo Amar Siiyay Saraakiisha Ciidanka Booliska Somaliya.